डायबिटिक रेटिनोप्याथी भनेको के हो ? नेपालमा कस्तो अवस्था ?
काठमाडौं- विश्वभरमै दृष्टि सम्बिन्धी समस्या बढ्दो क्रममा छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा झण्डै दुई अर्ब २० करोड मानिसमा दृष्टिसम्बन्धी समस्या छ । जसमध्ये तीन करोड १२ लाख १९ वर्षमुनिका बालबालिकामा दृष्टि समस्या देखिएको छ ।
समय समयमा मधुमेहका बिरामीले आँखा जाँच नगराएमा भविष्यमा अन्धोपना समेत आउन सक्ने विज्ञहरु बताउछन् । मधुमेहले विषेश गरेर आँखाको दृष्टि पर्दा र केही व्यक्तिमा मोती विन्दु जस्ता समस्याहरु निम्त्याउन सक्छ ।
डायबिटिक रेटिनोप्याथी (आँखाको दृष्टि पर्दामा मधुमेहको असर) भनेको के हो ? नेपालमा यसको अवस्था कस्तो छ ?
आँखाको रेटिनामा देखिने असरलाई ‘डायबेटिक रेटिनोप्याथी’ भन्ने गरिन्छ। नेपाल आँखा अस्पतालको तथ्याकं अनुसार सो अस्पतालको रेटिना क्लिनिकमा आउने आठ जना मधुमेहका विरामी मध्ये एक जनालाई आँखाको दृष्टि पर्दामा मधुमेहको असर परेको देखिन्छ । मध्ये गत वर्ष रेटिना क्लिनिकमा ४, ४९० जना दृष्टि पर्दा सम्बन्धी निदानका लागि आएका मध्ये १२ प्रतिशतमा डायबिटिक रेटिनाप्याथी देखिएको थियो जस मध्ये ५५ प्रतिशतलाई शल्यकृया उपचार विधी अपनाउनु परेको तथ्याकंमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भ हेर्ने हो भने ४ जनामा एक जनामा देखिएको छ। यसको तथ्याङ्क अलिकति ‘हाई’ नै छ। अहिले यो सामाजिक समस्या जस्तै भइसकेको छ। हरेक परिवारको एक जनालाई मधुमेह हुने सम्भावना हुन्छ। र मधुमेहले गर्दा ढिलो वा चाँडो एक न एक दिन असर गर्ने नै गर्छ। कसैलाई कढि असर गर्न सक्छ।
यदि रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रणमा नआएमा, उच्च रक्तचाप भएमा, रगतमा बोसोको मात्र धेरै भएमा, धुम्रपान गर्ने व्यक्तिहरुलाई कधुमेहले दृष्टि पर्दामा असर पार्ने सम्भावना बढि हुँदै जान्छ।
कसरी थाहा पाउँने ?
मुधुमेहले आँखामा पर्ने मुख्य संकेत भनेको आँखा धमिलो हुने नै हो। त्यपछि दृष्टि कमजोर हुने हुदै जान्छ र बिस्तारै आँखमा रगत देखा पर्न सुरु गर्छ। जसले गर्दा मानिस बिहान उठ्ने बित्तिकै आँखै नदेख्ने हुन सक्छ। आँखामा रगत जमका कारण यस्तो हुन सक्छ। यसलाई हामी अलि सिभियर केश भन्ने गरेका छौँ। तर प्रायः जसोलाई समस्या हुने भनेको दुष्टि कमजोर नै हो।
उपचार विधि के छ त ?
मुख्य कुरा त यो शरिरबाट हुने रोग हो। आँखाको मात्रै रोग होइन। शरिरमा भएको डाइबिटिजको असरले गर्दा हुने कुरा हो। यसले आँखामा मात्र नभएर शरिरका अन्य अङ्गहरु मुटु, किड्नीमा असर गर्ने गर्छ।
त्यसैगरी आँखमा पनि असर गर्ने गरेको हो। पहिलो कुरा त शरिरमा भएको सुगरको लेभललाई, प्रेसरलाई, बोसोको लेभललाई नियन्त्रणमा राख्न सक्यौँ भने आँखामा समस्या देखिने सम्भावना धेरै कम हुन्छ।
त्यस्तै समस्या देखिहाल्यो भने सुरुमै अस्पताल पुगेर आँखा जाँच गराउन पर्छ। केही गरी आँखामा असर देखिन थाल्यो वा रगत देखिन थाल्यो भने हामी लेजर विधीबाट उपचार गर्न सकिन्छ।
यो पछि पनि आँखामा जटिलता आयो भने हामी आँखा भित्र लगाईने विशेष किसिमको इन्जेक्सन माध्यबाट आँखा भित्र भएको रगतलाई सफा गर्ने र केही गरि पर्दा तानिएको छ भने त्यसलाई त्यही अनुसार केही मात्रामा हामी बिरामीको दृष्टि फर्काउन सक्छौँ।
आन्धोपना आउन सक्ने सम्भावना कति ?
अन्धोपना आउन सक्ने सम्भावना छ। बिरामीहरु मध्ये १÷२ प्रतिशतमा पुरै अन्धो भएर आउन सक्ने पनि हुन्छ । किन भने हामीले समयमै उपचार गरिएन भने जतिलटाहरु बढ्दै जान्छन् र त्यही कारणले आन्धोपना आउन सक्छ।
बच्न के गर्न सकिन्छ ?
समयमै ब्लड सुगर, ब्लड प्रेसर र रगतमा हुने बोसोको मात्रालाई समान्य अवस्थामा राख्नुको अलावा बेला बेलामा आँखाको पर्दाको जाँच गरेमा यसबाट केहीहदसम्म बच्न सकिन्छ।
( दृष्टि पर्दा विशेषज्ञ डा. किरण शाक्य सँगको कुराकानीमा आधारित )